Hillary Clinton Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha nyika dzakabatana Politicians Hillary Clinton Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Yedu Hillary Clinton Biography inokuudza Chokwadi pamusoro pehucheche Nyaya Yake, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Murume, Vana, Mararamiro, Hupenyu hweMunhu uye Net Kukosha.
Muchidimbu, ichi Chinyorwa cheHupenyu cheiye wezvematongerwo enyika weAmerica, kubva pamazuva ake ehumhandara, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira.
Hongu, munhu wese anoziva nezve rake rebasa rezvematongerwo enyika asi vashoma vanofunga nezve hupenyu hwake kunze kwegomba izvo zvinonakidza kwazvo. Iye zvino pasina imwezve nzira, rega titange.
Hillary Clinton Utano Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi: Upenyu Hwekutanga
Hillary Diane Rodham Clinton akazvarwa pazuva re26th yaGumiguru 1947 muEdgewater Hospital, Chicago. Iye akazvarwa semwanasikana wedangwe waamai vake, Dorothy Howell Rodham nababa, Hugh Rodham (akabudirira muridzi wechitoro chemachira).
Akakurira muPark Ridge, Illinois, inzvimbo yakanaka inogara mamaira gumi nemashanu kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwedhorobha reChicago. Hillary akakurira pamwe nevanun'una vake vaviri, Hugh Jr. (akazvarwa muna 15) naAnthony (akazvarwa muna 1950).
Hillary akaenda kuWellesley College, kwaainge achishanda mune zvematongerwo enyika. Akasarudzwa mutungamiri mukuru wekirasi asati apedza kudzidza mu1969 sezvinoratidzwa pasi apa.
Mushure mokunge apedza kudzidza, akabva apinda Chikoro cheYale Law, uko akasangana naBill Clinton. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Hillary Clinton Utano Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi: Ukama Hupenyu
Hillary Rodham akaroora Bill Clinton munaOctober 11, 1975, pamba pavo muFayetteville.
Asati asarudza kuroorana, Clinton ainge atenga imba pachivande kuti aida kuti aifarira. Apo akakumbira kuroorana naye uye akabvuma, akaratidza kuti vaiva neimba yacho. Mwanasikana wavo, Chelsea Victoria, akaberekwa musi waFebruary 27, 1980.
Muna 2010 mwanasikana waClinton Chelsea akaroora aimbova Goldman Sachs mubhangi wezvekudyara uye aripo iye zvino weedge fund maneja Marc Mezvinksy.
Musi waSeptember 26, 2014, Clinton akazova mbuya vekutanga apo mwanasikana weCentral akabereka Charlotte Clinton Mezvinsky. Chelsea yakabereka mwana wake wechipiri Aidan Clinton Mezvinsky musi waJune 18, 2016.
Hillary Clinton Utano Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi: Upenyu hweMhuri
BABA: Hugh Ellsworth Rodham (April 2, 1911 - April 7, 1993) aiva muzvinabhizimisi weAmerica. Akaberekerwa nababa veChirungu (mumiri wemagetsi) uye amai veWales. Huge Rodham aifarira zvikuru vana vake sekufananidza pasi apa.
MuHondo Yenyika II Rodham akashanda muUnited States Navy. Mushure mehondo, akagadzira rakabudirira basa muindasitiri yekupa indasitiri. Rodham akapinda mune zvematongerwo enyika sezvo akambomhanyisa Chicago alderman seDemocratic-leaning independent in 1947. Mwanasikana wake Hillary akaibvisa ipapo. Huge akafa musi waApril 7, 1993 (ane makore 82).
AMAI: Amai vaClinton, avo vaimbova Dorothy Emma Howell, vakazvarwa musi waJune 4, 1919, vachiva varombo uye vasina hanya. Pasi pane mufananidzo waDorothy nemwanasikana wake, Hillary.
Vabereki vaDorothy vakarwa zvakasimba muimba muChicago zvokuti vakagovana nemamwe mhuri ina. Baba vake, mudzidzi wemoto, vakapiwa kurambana uye kuchengetwa kwevana vaviri mushure meamai vaDorothy havana kumbozviratidza mumatare kuti varwise mhosva dzekuregererwa uye kushungurudzwa. Dorothy nehanzvadzi yake duku vakatumirwa pachitima chepamuchinjikwa kuti vagare naambuya navanambuya vavo muCalifornia. Dorothy aiva 8, hanzvadzi yake yaiva 3.
Amai vavo vainge vakwegura uye vakaoma. Akasarudza chimiro chavaMusika uye akaregerera kusateerera - Dorothy haana kubvumirwa kuenda kumapato kana kuva nevashanyi. Mushure mokunge aenda-kana-achibata imwe Halloween, akavharirwa muimba yake yekurara kwemakore, regai kunze kuenda kuchikoro.
VERENGA Donald Trump Kubata Vana Nhoroondo Plus Untold Biography Facts
Pana 14, Dorothy akapukunyuka kunzvimbo yaamai vake zvakasimba nokuda kwekusaregerera America kweHokuderera Kukuru. Akabika, akachenesa uye akawana mhuri muSan Gabriel, Calif., Pakutsinhana nzvimbo, bhodhi uye $ 3 pavhiki. Akanga ari pedyo nehurombo hwakanyanya, asi muimba iyoyo, Dorothy akaziva kuti mhuri yaiva chii.
Nekutsigirwa kwemhuri yake yakagamuchirwa uye rubatsiro kubva kuvadzidzisi vane simba, akazopedzisira apedza chikoro chesekondari. Akafa musi waNovember 1st, 2011 (ane makore anopfuura 92).
BROTHERS: Aimbova Secretary weHurumende vanin'ina vaviri, Tony naHugh Rodham. Tony Rodham akafananidzirwa pazasi ane bhizimusi rekuchera goridhe uye kambani yezvizoro muCalifornia.
Hugh Rodham, mumwe muzvinabhizimusi akafananidzirwa pazasi ihama yepakati. Anowanzodaidzwa kuti "Hughie".
Hugh Rodham akambotaurwa kuti ane tsika yekurapa White House pasina ruremekedzo. Hughie aizozviratidza muzvipfeko zvakaipisisa. … Aizove akapfeka zvikabudura zvine mabhora egorofu paari uye T-shirt. Aizogara muSolarium, uye zvakataurwa kuti Hillary aisazobata eyelash panguva yaaive pamusangano wezvematongerwo enyika. Vanhu vaiuya vese vakapfeka zvekudya kwemanheru, uye Hughie aigona kukambaira akapfeka zvikabudura zvake obva arara, ”akadaro McCoy.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Hillary Clinton Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana kubvunza isu!.